Jose Mourinho Ayaa Soo Jeediyey Inuusan Ka Tagi Doonin Inter Waa Hadii.......? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Jose Mourinho Ayaa Soo Jeediyey Inuusan Ka Tagi Doonin Inter Waa Hadii.......?
Jose Mourinho ayaa soo jeediyay inuusan ka tagi doonin Inter oo uu ugu biiri lahaa Real Madrid hadii uu dib ula soo laaban lahaa Nerazzurri ka dib guushii Champions League ee ay ku gaadheen Santiago Bernabeu.
Mourinho ayaa Inter ku hogaamiyay seddex koob xilli ciyaareedkii 2009-10 taasi oo ka dhigtay kooxdii ugu horeysay ee Talyaani ah ee hanata koobkaan.
Waxaa lagu soo gabagabeeyay guul 2-0 ah oo ay ka gaartay kooxda Bayern Munich garoonkeeda Madrid, kaasoo Mourinho uu heshiis la galay inuu qabto tababarahooda cusub.
Kaddib dabaaldegyadii ay Inter ku sameysay garoonka, Mourinho si dhakhso ah uma uusan safrin dib ugu laabashada Milan, wareysi uu siiyay The Sportic, wuxuu sharraxay sababihii uu u qaatay go’aankaas.
Mourinho, oo la wadaagaya ilko cadowga daafaca Marco Materazzi ka hor inta aysan kooxdu ka bixin Bernabeu, ayaa yidhi: “Markii aan kalmadahaan u haystay isaga [Materazzi], waxay ii ahayd sidii aan isku duubay ciyaaryahan kasta oo ah wax aan isku dayey inaanan sameynin.
“Aniga waxaan kula joogay garoonka xafladaha, billadaha, koobkii. Waan la joogay laakiin markaa dib ugama laaban qolka labiska sababtoo ah ma aanan dooneynin inaan salaamo.
“Aad bay iigu adkeyd mana aanan dooneynin inaan ku biiro Milan maxaa yeelay dadku waxay dhahayaan waxaan qandaraas kula jiraa Real Madrid. Runtii run ma ahan. Waxaan heshiis la galay, laakiin ma aanan laheyn wax qandaraas ah.
Waxaan runtii doonayey inaan u aado Real Madrid waqtigaas. Runtii waxaan runtii doonayay inaan isku dayo inaan ku guuleysto horyaalnimada Spain kadib horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga. Laakiin waxaan ka baqay haddii aan dib ugu laabto kooxda AC Milan iyo falcelinta Ciyaartoyda iyo taageerayaasha, waxaan ka baqay inaanan bixi karin. Waxaan dhihi karaa waan cararay, waan ka cararay iyaga.
Maalmo ka dib, waxaan la saxeexday Real Madrid ka dibna waxaan ku laaban karaa Milan oo waxaan la kulmi karaa madaxweynaha oo aan casho la wadaagi lahaa milkiilaha Massimo Moratti iyo qoyskiisa”
Jose Mourinho Inter ayaa ka qaaday Barcelona semi-finalka, isagoo ka badbaaday 72 daqiiqo oo ay weheliyaan 10 nin lugtii labaad ee ka dhacday Camp Nou ka dib markii casaan la siiyay Thiago Motta.
Inter ayaa looga badiyay 1-0 laakiin celcelis ahaan 3-2 ayey ku badiyeen, iyadoo Mourinho uu ku dhex yaacay garoonka si uu u dabaaldego waqti buuxa.
Goolhayaha kooxda Barcelona Victor Valdes ayaa si caro leh uga falceliyay dabaaldegyada, laakiin Mourinho – inkasta oo xafiiltan kulul uu kala dhexeeyo Barca mudadii uu joogay Madrid – hadana uma dulqaadan doono Blaugrana.
Ciyaarta way dhamaatay, qof walbana siyaabo kala duwan ayuu uga falceliyey. Waxaan helnay dad ooyaya. Waxaan laheyn dad jilba joog ah. Waxaan helnay dad gabi ahaanba daalacan dhulka.
Waxaan helnay dad hareeraha ka socda waxaan u orday taageerayaasheena sababtoo ah waan ogahay sida ay micno ugu leedahay iyaga.
“Markaa markii aan nafteena ku raaxeysanahay, iyagu [Barcelona] uma aysan fal celin sida ugu fiican ee aan ka tarjumaynin cabirida kooxda, koox aan aad ugu faraxsanahay mudadii aan halkaas ka shaqeynayay, koox taas oo aan ogahay inay tahay naadi heer sare ah.
“Laakiin mararka qaar marka aan niyad jabno waxaan ku yeelan karnaa falcelin shucuureed. Dhibaato malahan haba yaraatee, in kasta, waa xusuus fiican”